किन आत्महत्या गर्छन पत्रकार ? – Sourya Online
अञ्जु कार्की २०७६ भदौ ३ गते ८:१७ मा प्रकाशित
केही वर्षअघि पत्रकार मित्रलाल बालक (अधिकारी)ले धरहाराबाट हामफालेर देह त्याग गरेको समाचारले निकै सनसनी मच्चायो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको जीवनी लेख्दै गरेका पत्रकार भरत भूर्तेल शव गौशालाको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । पुस्तक लेखनका लागि राष्ट्रपति डा. यादवकै निजी सचिवालयले प्रबन्ध गरिदिएको कोठामा पत्रकार भूर्तेलको शव फेला परेको थियो ।